भारतीय चकलेटको गुण्डाराज ,किन लिन्छन् प्रिन्ट भन्दा दोब्बर मूल्य ? - TV Annapurna
भारतीय चकलेटको गुण्डाराज ,किन लिन्छन् प्रिन्ट भन्दा दोब्बर मूल्य ?
April 6, 2018 May 5, 2018 TV-Annapurna
राजकुमार बिष्ट/नवराज श्रेष्ठ , टिभी अन्नपूर्ण ।
नेपालमा भारतीय चकलेटले गुण्डाराज चलाइरहेको छ । ग्लोबल कन्जुमर प्रोडक्ट बैङ्गलुरुको डेरी मिल्क, मोर्डन इन्डियनस् फुड प्रोडक्ट प्रा. लि. को क्याडवरी तथा मोन्डलेज इन्डिया फुड्स प्रा.लि. को लोभित, किट्क्याट, स्निकर लगायतका भारतीय चकलेटहरु खुलेआम रुपमा बजारमा दोब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । सामान्य किराना पसलदेखि ठुला डिपार्टमेण्टल स्टोरसम्म यी चकलेटहरुको राज चल्दै आएको छ। र बिक्रेतादेखि विचौलिया सम्मले मनग्ये कमाइ गरिरहेका छन् । न त सरकारको ध्यान छ, न त कुनै सरोकारवाला निकायको । केवल हिसाब किताबको भुमरीमा पारिदिन्छन् सबैलाई । चाहे सरकार होस्, चाहे अरु नियमनकारी निकाय। सामान्य बिक्रेताले ९० रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ प्रिन्ट मूल्य भएकोमा १८० नेपाली रुपैयाँ लिन्छन् । अझै ठुला डिपार्टमेण्टल स्टोरहरुले त यो २०० रुपैयाँसम्म लिने गरेको भेटियो।
किन लिन्छन् प्रिन्ट भन्दा दोब्बर मूल्य ?
सामान्यतया ९० रुपैयाँ भारतीय मूल्य प्रिन्ट भएको कुनै पनि वस्तुको नेपाली बजार मूल्य १४४ रुपैयाँ भन्दा बढी लिन पाउँदैन तर त्यही चकलेट रु १८० देखि रु २०० खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । क्याडवरी, किटक्याट, डेरिमिल्क, स्निकर लगायतका चकलेटहरुको बजार मूल्य प्याकेटमा प्रिन्ट गरिएको मूल्य भन्दा दोब्बर लिने गरेको पाइन्छ । राजधानीका विभिन्न पसल तथा स्टोरमा गई यसको मूूल्यको बारेमा जानकारी लिँदा प्रायः सबै साना स्टोरहरुले दोब्बर मूल्य लिने गरेको पाइयो । अझ नाम चलेका ठुला स्टोर भाटभटेनी, सेल्सवेरी तथा विगमार्टका कुनैमा दोब्बर त कुनैमा त्यो भन्दा पनि बढी मूल्य लिने गरेको पाइयो । बिगमार्टमा त दोहोरो मूल्य समेत लिएको पाइयो । भारतीय ९० रुपैयाँ प्रिन्ट गरेको एउटै चकलेटको मूल्य कतै १८० रुपैयाँ त कतै रु २०० सम्म लिने गरेको भेटियो ।
अधिकांश बिक्रेताहरुलाई सोध्दा यसको बारेमा अनविज्ञ रहेको पाइयो । माथिबाट त्यहीँ मूल्यमा बेच्न भनेको छ र खरिद मूल्य पनि बढी नै छ भन्ने जवाफ पाइन्छ । केही विचौलियाहरुले त सिधा रुपमा प्याकेटमा प्रिन्ट गरेको मूल्य ९० रुपैयाँ भारतीय मूल्य हो ,नेपालमा आउँदा लाग्ने भन्सार, यातायात तथा व्यापारीलाई नाफा खोइ त ? भनेर उल्टै प्रश्न गर्न समेत भ्याए । ५ प्रतिशत यातायात खर्च ३३ प्रतिशत भन्सार तथा २० प्रतिशत नाफा लिँदा २२७ रुपैयाँ हुने बताए, तर किन १८० रुपैयाँ मात्रै लिनु भयो भन्दा हामीले हाम्रो नाफा कटाएर बेचेका छौँ भनेर बताए । यसबाट के बुझिन्छ भने यी चकलेट व्यापारीहरुले नेपालको सामान्य भन्दा सामान्य बजारको नियम पनि पालना गरेका छैनन् । यस्तो लाग्छ कि सरकारी नियमनकारी निकायलाई पनि यस्तै हिसाबको भुमरीमा पारेर रनभुल्लमा पारिदिएका छन् या त यी चकलेटको मिठो स्वादसँगै केही मोटो रकम दिएका छन् ।
आखिर के हो त यथार्थ ?
३८ रुपैयाँ ५० पैसा भारतीय मूल्यमा उत्पादन हुने चकलेटको बजार मूल्य नेपाली १२० रुपैयाँ
बजारको विश्वव्यापी नियम साधारण भाषामा भन्ने हो भने जुन अधिकतम बिक्री मूल्य प्याकेटमा लेखिएको हुन्छ, त्यो उत्पादन मूल्यमा वितरण मूल्य तथा नाफा र ट्याक्स सबै जोडिएको हुन्छ । हुन्छ । अधिकतम बिक्री मूल्य उपभोक्तासँग लिने अन्तिम मूल्य हो । भारतीय बजारको कुरा गर्ने हो भने साधारण खुद्रा बिक्रेता सम्म पुग्नको लागि बीचमा दुईजना बिचौलिया डिस्ट्रिब्युटर र सुपर रहेका हुन्छन् । खुद्रा विक्रेतालाई २० प्रतिशत नाफा दिने हो भने भारतीय ६० रुपैयाँ पर्ने वस्तुको मूल्य साधारण हिसाबमा ५० रुपैयाँ लागत पर्दछ । यसै गरी सुपरले खाने ६ प्रतिशत हिसाब गर्ने हो भने ४७ रुपैयाँ ३६ पैसा यसको लागत पर्दछ । यसै गरी डिस्ट्रब्युटरले खाने २.५ प्रतिशत घटाउने हो भने ४६ रुपैया २० पैसा यसको डिस्ट्रब्युटरको लागत हुन्छ । यसमा उत्पादकको नाफा २० प्रतिशत घटाउने हो भने यसको उत्पादन लागत ३८ रुपैयाँ ५० पैसा अर्थात् नेपाली ६१ रुपैयाँ ६० पैसा मात्रै हुन आउँछ। यो त भयो भारतीय बजारको मूल्य, अब कुरा गरौँ नेपाली बजारको । उत्पादकले नाफा सहित न्यूनतम मूल्यमा विदेश पठाउने गर्दछ । २० प्रतिशत नाफा जोड्ने हो भने नेपालको डिस्ट्रिब्युटरले भारतीय ४६ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार तिरेको हुनु पर्दछ। यसको ३३ प्रतिशत भन्सार मुल्य तिरे पनि ६१।२० पैसा मा नेपाल आईपुग्छ । ५ प्रतिशत यातायात खर्च राख्ने हो भने ६३।५१ पैसामा आइपुग्छ । यसको नेपाली मूल्य भनेको १०० रुपैयाँ हुने गर्दछ । यसरी ३८ रुपैया ५० पैसा भारतीय मूल्यमा उत्पादन हुने चकलेटको बजार मूल्य नेपाली १२० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
के गर्दैछ राज्यको आपूर्ती विभाग ?
बजारमा बिक्री हुने सामाग्रीहरुको मुल्य हेर्ने निकाय आपुर्ती विभागसँग चासो राख्दा बजारमा तोके भन्दा वढी मूल्य लिएको पाइए तिनलाई कारवाही हुने जवाफ पाइएको छ । यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले यदि प्रिन्ट गरेको मूल्य भन्दा बढी रकममा बिक्री भएको भए तत्काल संयुक्त अनुगमन गरी कारवाही गरिने बताए । प्याकेटमा भारतीय ९० रुपैयाँ प्रिन्ट भएको भए त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु १४४ भन्दा बढी हुन नहुने उनले बताए । यदि त्यसो गरिएको हो भने त्यो सरासर ठगी नै हो, उनले भने त्यस्तालाई तत्काल कारवाही गरिन्छ । विगत एक बर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बजार अनुगमन अधिकृत पदको दरबन्दी खाली भएको कारण अनुगमनमा समस्या भएको बताए । चाडवाडको बेलामा संयुक्त अनुगमन गरे पनि त्यसपछि गर्न नसकिएको बताए । अब तत्काल बजार अनुगमन गरी यदि बजारमूल्य भन्दा बढी लिने गरेको पाइए ठाँउको ठाँउ कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दै
जमानतमा छुुट्ने सलमानको योजना असफल